Sandrandahy - Fandriana - Miarinavaratra amin'ny nahitako azy
Nampidirin'i radotiana | 4 Des, 2008
Miezaka mitsidika toerana iray mbola tsy nalehako aho isaky ny mandeha any Dago. Efa ela moa aho no mba te ho any amin'izany Fandriana izany ka dia tapa-kevitra tampoka tamin'ity indray mitoraka ity.
Ny fahaizan'i Lefy nitantara ny momba an'io Faritra io tao amin'ny i Forum Moov no anisan'ny nanentana ahy.
Talata atoandro izahay no niditra ny tananan'i Fandriana izay 81 km raha avy ao Antsirabe.
Io ny ampahany amin'ny tananan'i Fandriana raha tazanina avy aty amin'ny arabe mivoaka mankany Miarinavaratra.
Efa hiditra ny tanana ianao no mahita ity takelaka fanoroan-dalana ity. Manamorona iny lalam-be mankany antsena iny no misy ny ankamaroan'ireo trano vaventy mampalaza an'i Fandriana. Ny mahavariana dia saika mikatona izy ireo. Misy aza moa ny sasany dia asiana bara hazo na vy mihitsy avy ety ivelany isaky ny varavarana. Tsy sahy naka sary aho fa toa masiaka fijery ny olona.
Vetivety izahay telo lahy dia tapi-dalankaleha rehefa tonga tao antanana. Azo iantsoana tsara ny finday avy eo Fandriana ka dia niantso ilay namako iray mipetraka any Tana aho mba hanontany azy izay azo atao eo antanana. Lehibe tao Fandriana mantsy izy. Hadisoam-panantenana anefa ny ahy fa hoy izy hoe "Tsy misy azo atao firy ao raha tsorina aminao ny tena marina afa tsy ny mandeha mijery mpianatra mirava. Ny mpianatra hoy izy mahita fahafinaretana mijery ny vahiny tonga moa ny vahiny koa mba misy analana azy. Misy tsena maresaka any Miarinavaratra hoy ihany ilay namako isaky ny Alarobia fa mandehana any. Resiny lahatra aho dia nanapa-kevitra ny hijanona hatory izahay. Vetivety dia maizina ny teo antanana. Maizina tena maizina satria nisy fahatapahany koa ny famatsiana herinaratry ny Jirama. Jiro labozia roa no nampirehetina hanazava ny efitrano natoriana. Tamin'ity indray mandeha ity no nahalalako fa hay misy mpamaky ihany ireny baiboly manga napetraky ny Gideoana iraisam-pirenena any amin'ny hotely ireny. Iny izaho mbola varimbariana mijery ny sary nalaiko ny andro tontolo iny no indro i T... nanomboka namaky. Ilay ampahany amin'ny teny anglisy no novakiany ka hoy aho hoe vakio mafy fa ahitsiko raha misy diso fanonona sady somary nanalako kely ihany izy. Lany tamin'ny fampianarana teny anglisy azy roalahy tamin'ny alalan'ny soratra masina teo ny alina :-)
Vao nangiran-dratsy izahay dia efa nanainga hamonjy an'i Miarinavaratra. Mbola rakotry ny zavona matevina ny tananan'i Fandriana tamin'izay.
Nanontany tena aho hoe mba tamin'ny firy loatra ireto olona ireto no efa nanomboka nandeha tongotra sady niloloha ny entan-keliny hoentiny hamidy any antsena.
Ambohimpihaonan'ny tantsaha tokoa ny tsena.
Santionany amin'ireo trano vaventy izay fahita any Fandriana io amin'ny sary eo ambany io. Efa mampiasa finday koa ny olona amin'iny faritra iny ary dia anisan'ny antondia any antsena ny famahanana herinaratra ny finday. 400 Ariary ny sarany izay maharitra herinandro hono. Mazava ho azy moa izany fa tsy velomina mandrapaharivan'ny andro ny findaindry zareo fa tsitsiana araka izay azo atao. Amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 8 ora ihany no velomina ny finday amin'ny maraina ary amin'ny ora toy izany koa ny hariva.
Mitobaka ny fitafiana "fripy". Miova tsikelikely noho izany ny endriky ny tontolo ambany vohitra. Na dia eo aza izany dia mbola misy koa ireo azo itarafana ny tena maha gasy.
Na trano tsotra io na trano vaventy dia samy mampiasa an'ity "home made antenna" ity daholo mba hijerena vata fahitalavitra. Ohatran'ny hoe ilay vy manify boribory amin'ny kodiarana bisikileta izany no fahitako azy.
Tsy azo nodikaina i Sandrandahy raha hoany Fandriana ianao. Narahina ara-bakiteny ny nampidirana ny teny Anglisy ho tenim-pirenena fahatelo ao Dago.
Nasehoko ilay namako avy any Fandriana ireto sary ireto rehefa tonga tao Tana dia hoy izy nanala kely tamiko hoe "Tena nandeha tany Fandriana marina ianao"
Post ao anatin'ny Ankapobeny | Hevitra (18) | Verindrohy (trackback) (0)
AF(o)RI(a)KA - Mivaivay tsy mety ho tony
Nampidirin'i radotiana | 1 Des, 2008
Tsy misy sary ny androany fa notagevan'i Kdaomba dia voatery hanoratra fohy ny amin'ny fahitako an'i Afrika. Misamboaravoara be tsy mety ho tony io kaontinantantsika io. Be ny antony tsy mampandroso azy fa ireto ny ahy no mba tsikaritro:
Matahotra ny tena atao hoe demokrasia ny ankamaroan'ny mpitondra Afrikana ka dia ampangininy ny vavan'ireo izay sahy manankiana na manohitra. Ampidiriny amponja na alefany sesin-tany ankolaka na mivantana ireo mpanohitohina ny fitondrany. Nisy mihitsy aza moa ireo nahasahy namono nahafaty.
Tsy te hiala eo amin'ny fitondrana mihitsy ireo mpitondra Afrikana. Raha mbola azony atao koa aza ny hijanona eo mandra-pahatapitry ny fofonainy dia izay no imatimatesany. Ovainy na tovanany daholo izao lalam-panorenana rehetra izao mba hanamafisany ny fahefana eo ampelan-tanany. Be izay mpitondra nahavelom-panantenana tao Afrika tao izay fa rehefa ela nitondrana nivadika ho biby masiaka mampatahotra ihany. Jereo fotsiny ohatra ny adin'dry Mobutu Sese Seko tao Congo. 32 taona ngarangidina no nibodoany ny fahefahana. Vao tsy ela akory izay ry Robert Mugabe ao Zimbabwe no nalohan'ny safidim-bahoaka fa mbola nitady irika hifaharana ihany tamin'ny tsy nanekena ny vokam-pifidianana dingana voalohany. Tsy te hahalala izay hevitry ny firenena manodidina fa rehefa hoe izy hono no lany dia izy izany no lany. Mbola tantara mitohy moa ny aminy...
Mangoron-karena araka izay azony atao koa ny mpitondra Afrikana. Alainy ny tany mahavokatra sy be harena ankibon'ny tany. Ovainy ny rafi-pitondrana sy ny fitantanana misy mba hanomezany tombon-dahiny ny fiharinkareny. Jereo fotsiny ohatra ny adin-dry ...
Vohiziny ankolaka ny tsy fitoviana ara-poko sy fihaviana. Ialahy Tutsi, izahay Hutu, ...tsy mba havelany hahatsapa ny vahoakany fa ra mena daholo ihany anie no mikoriana ao anatin'ny tsirairay.
Mbola lava ny lisitra fa aleo mba ianao indray no manohy azy aneritreritra
Aza omena enti-mody intsony aho ry Kdaomba fa lasa mampite-hivangabao :-)